तिलिचो ताल घुम्नका लागि कहिले जाँदा सहज हुन्छ ? – Puleso
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ तिलिचो ताल घुम्नका लागि कहिले जाँदा सहज हुन्छ ?
तिलिचो ताल घुम्नका लागि कहिले जाँदा सहज हुन्छ ?
पुलेसो २१ पुस, २०७७, मंगलबार ११:०१
तिलिचो ताल आन्तरिक पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । ४९१९ मिटर उचाइमा रहेको यस तालको लम्बाइ ३/९ किलोमिटर रहेको छ भने चौडाइ १/६ किलोमिटर फराकिलो छ ।
कूल ४/८ वर्ग किमीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस ताल वरिपरि सेता टल्किने तिलिचो हिमाल, अन्नपूर्ण रेन्ज र नीलगिरि हिमाल रहेका छन् । हिमालको काखमा रहेको निलो सङ्लो पानी टलपलाई रहेको दृश्यले जो कसैको पनि मन लोभिने गर्छ ।